Is-afgarad laga gaarey bangiyada EU ee xaaladooda dhaqaalo liidato - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Is-afgarad laga gaarey bangiyada EU ee xaaladooda dhaqaalo liidato
"Hada ka bacdii bangiyada waa in ey heystaan maal adag"
La daabacay torsdag 27 juni 2013 kl 14.23
Magaalada Bryssel xalay waxaa is-afgarad la xiriira sida laga yeelayo bangiyada xaalada adaga ee dhaqaale wajahaya ku gaarey wasiirada dhaqaalaha ee midowga Yurub. Iswdhen waxaa muhiim u aheyd in ayada ay go’aan ka gaarto sida ay ka yeeleyso bangiyadeeda xaalada ku xumaato. Wasiirka dhaqaalaha Anders Borg ayaa ka waramaya waxa uu is-afgarataan soo kordhinayo iyo waxuu ugu micno yahay Iswedhen.
– Waxaan hada is-afgarad ka gaarney qaab loola tacaalayo bangiyada xaalada dhaqaale oo adag ku sugan. Waxaana la sameeyey dhabo cad oo ay bangiyada ku qiimeyn karaan culeyska qatarta. Halkee ay deymaha iska aruursan lahaayeen. Sida aan Iswedhen ahaan u aragnana taas waa sida ugu ugu haboon oo xaal noqon karta.
Mar Anderborg la weydiiyeyna waxey is-afgaradkaa qaas ahaan bangiyada ugu micnoyaheyna waxuu yeri.
– Waxey ka micno tahay in halkeedii ka sii soconeyso sharuudii Iswedhen ka jirtey ee aheyd in bangiyada heystaan maal adag oo ay kaga gudbi karaan xaaladaha adag ee soo wajaha si ay u ilaaliyaan hantida canshuur bixiyaasha. Ayuu yeri Anders Borg.
Wasiirka oo sii sharaxayey waxa uu is-afgaradkaan ka micno yahay ayaa sheegey in hada ka bacdii bangiyada qatarta in ay kacaan ugu sugan la saarayo badbaadintooda marka hore mulkiilayaasha waawey ee iska leh bangiga iyo macaamiisha hantida u taalo bangiga, markaas kabacdiina ay dowlada tahay in ay ku kabto dhaqaalaha dhiman sii loo badabaadiyo bangiga. Saameynta dhaqaale is-afgaradaan wasiirada ku yeelan doonto dhaqaalaha Yurub ayuu wasiirka sheegey in ay ahaan doonto in la dul dhigo sharuudo adag bangiyada oo ah in ay ka digtoonaadaan qataraha oo ay yareeyaan doonaan bixinta deymaha.